Ethereum obere akpa ImToken nwere $ 35B na ego, karịrị 99% nke US mmiri - Blockchain News
Ethereum obere akpa ImToken
China dabeere ImToken, otu n'ime ndị mbụ Cryptocurrency na Ethereum wallets depụtara na Apple App Store, ka esichara karịa $ 35 ijeri na ego na n'oge gara aga afọ ole na ole, outperforming Coinbase.
Yiri Blockchain, MyEtherWallet na MyCrypto, ImToken bụ a free ma na-abụghị portal wallet na-enye ohere ka ndị ọrụ na-echekwa, eziga na-enweta cryptocurrencies dị ka Ethereum mgbe retaining akara ha onwe igodo na akaụntụ.
Na mmalite ụbọchị nke Ethereum, tupu na-emepe emepe na-ewu ewu wallets dị ka MyEtherWallet na MetaMask, ImToken bụ nanị pụrụ ịdabere na mobile wallet ọrụ nwere ike iji on mobile ngwaọrụ. ImToken mbụ-haziri uru na mfe nke ngwa rụpụtara na n'elu ikpo okwu na-ejizi ihe karịrị $ 35 ijeri na ego, na-anọchite anya karịa 99 percent nke US mmiri.
Na Mee, Bloomberg kọrọ na Xapo, nke esichara karịa $ 10 ijeri na ego na n'oge gara aga afọ atọ, nwere ihe na ya ego karịa 5,670 bịara n'ikperé mmiri nke United States ma ọ bụ na 98 percent nke mba mmiri. $ 35 ijeri na ego maka ethers na ndị ọzọ na cryptocurrencies ga-eme ka ImToken n'elu 0.5 percent, tinyere isi mmiri na ego oru.
Investment si Chinese VC Giant IDG Capital
IDC Capital si China dabeere ImCrypto, nke bụ otu n'ime ndị kasị ibu na ịmalite isi obodo sịrị na Asia, natara a $ 10 nde gburugburu nke ego a izu. IDG Capital ka nyekwara ihe karịa ihe 700 ụlọ ọrụ na 150 ịga nke ọma exits, gụnyere multi-ijeri dollar ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka mobile ekwentị onye Xiaomi, wearable batrị onye Anker, cryptocurrency ụlọ ọrụ gburugburu na cryptocurrency gbanwee Coinbase.
The azụmahịa nlereanya nke ImCrypto bụ nke yiri nke Blockchain na ndị ọzọ na mgbochi ndị na-abụghị na-ebusa nyiwe. Ruru ya uzo ọrụ na ya free software, na o nweghị anụ isi iyi nke ego. Mgbe mfe nke ImCrypto ikpo okwu n'ikpeazụ dugara ya ogologo oge ọma, ike nke monetizing ImCrypto n'agbanyeghị ọtụtụ ijeri dollar echekwara n'elu ikpo okwu ga-ele ya anya dị ka a nsogbu bụ isi site investors, karịsịa ịmalite isi obodo sịrị, na omenala technology ụlọ ọrụ.
IDG Capital si $ 10 nde ego gosiri obi ike na ogologo oge uto nke cryptocurrency na wallet rụọ. Ọ bụ ezie na ndị na-abụghị maka ozi-free wallets ugbu a enweghị ahịa na ala uru n'akụkụ peeji, ịmalite isi obodo sịrị ka na-agba ọsọ ọtụtụ nde dollar uru nke ego, ghọtara na nwere nke cryptocurrency wallets.
“Anyị ghọtara nwere nke Ethereum na a nnọọ n'oge ogbo na lekwasịrị anya differentiating onwe anyị site asọmpi, na ibu bụ n'ụzọ zuru ezu organic, anyị enweghị ahịa ma ọ bụ mgbasa ozi mmefu ego,” kwuru ImToken nchoputa Ben Ọ, na-ekwu na nwetara ọhụrụ na-arụ ọrụ ego IDG ga-enyere ụlọ ọrụ na-achụso ahịa na ike ike mgbasa ke uwa cryptocurrency ahịa.
Trust si investors
na nso nso, n'oge N'ajụjụ ọnụ Bloomberg Television, Dan Morehead, CEO nke Pantera Capital, a $ 1 ijeri cryptocurrency oke ego, kwuru na cryptocurrency ahịa si ekwu ọnụ ahịa nwere ike gafere $ 40 puku ijeri n'ikpeazụ.
“The $ 400 ijeri kaadị ahịa pụrụ iru $ 4 puku ijeri, na ọbụna $ 40 puku ijeri bụ maa na o kwere omume, ọ bụ 10-afọ amụma, ọ gaghị eme n'otu ntabi anya,” ọ sịrị Morehead.
Nnukwu-ọnụ ọgụgụ na ịmalite isi obodo sịrị na oke ego na-enwekarị nchekwube banyere ogologo oge ọdịdị nke cryptocurrency ahịa na nwere obi ike na cryptocurrencies ga-aghọ a isi akpan owo klas ga mpi na omenala akụ na zuru ụwa ọnụ ego usoro.
Stock cup - Walls nke ịzụrụ na ahịa
Gịnị bụ "mgbidi" f ...
ngọngọ yinyeCoinbasekaadịcryptocurrenciescryptocurrencyethereumn'elu ikpo okwuiriba-amawallet